ဒီပုံရိုက်သူ တွတ်ပီ ..မော်တော်ဘုတ်လေး စီးရင်း သက်စွန့် ဆံဖျားရိုက်ထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ...၂၀၀၈ရဲ့ နောက်ဆုံးတရက် ။မနက်စောစောထဖြစ်ပါရဲ့ ။အဟဲ စောစောထတယ်လို့တောင်ပြောလို့ မရပါဘူး။ညကအိပ်မှမအိပ်ဖြစ်သေးတာလေ ။ သံယောဇဉ်လေးနဲ့ တွေ့ လိုတွေ့ ငြား စောင့်နေရင်း ညလုံးပေါက်သွားတာပါ။တယောက်တနေရာစီဝေးနေရတော့လဲ ဒီလိုဘဲပေါ့။ အချိန်ချင်းကလည်း ၅နာရီလောက် ကွာခြားနေတော့ ဒီမှာ သူများတတွေ Happy New Year အော်နေကြချိန်မှာသူ့ ဆီဖုံးဆက်ပြီး ယား လိုက်မိရင် သူကဘာကြောင်တာလဲလို့ပြောတာခံရအုံးမယ် ။သူ့ ဆီမှာ ညနေပိုင်းအချိန်ဘဲရှိနေအုံးမှာလေ ၊ ဒါကြောင့် တမြေစီဝေးကွာနေရတဲ့ဒုက္ခတွေထဲမှာ ဒါလဲ တဒုက္ခပေါ့ နော် ။ ဘယ်လို wish လုပ်ရမယ်မှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး။
ဒီတပါတ်ကစပြီး ဒီတိုင်းပြည်မှာ Sydney NYE 08 ဆိုတဲ့အလံတွေ နေရာ အနှံ့ ထူထားပြီး မနေ့ ကစလို့ Circular Quay, Opera House ,Harbour Bridge နေရာတွေမှာ နယူးယားကြိုဖို့မီးရှုးမီးပန်းတွေ အစွမ်းကုန် လွတ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြလေရဲ့ ။ညနေ ၃နာရီ အချိန်က စပြီး ဒီပါတ်ဝန်းကျင်တခုလုံး ကားအသွားအလာပိတ်ပြီး လူတွေအားလုံးလမ်းလျှောက်ကြပေ့ါ။ လူတွေကလည်းစည်းကမ်းရှိကြတော့ပျော်စရာကောင်းပါတယ် ။အစိုးရဆန်တဲ့ 
သူတို့အစိုးရကလည်း သူ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက် အဖက်ဖက်က လိုလေသေးမရှိရလေအောင် စီစဉ်ပေးထားတာကိုး ။လူ့ ကံ ၊ ၀ကံ တွေကလည်း မတူကြဘူးလေနော် ။ဘ၀ အကျိုးပေးတာခြင်း ကွာကြတယ်ပေါ့။ကိုယ့်မြန်မာပြည်ကြီးလဲ ဘယ်တော့ များမှ ဒီလိုအခြေ အနေမျိုး ရောက်မှာလဲ ။စေတနာမှန်သော အစိုးရကြီးရဲ့ အောက်မှာ စည်းကမ်းရှိစွာ ပျော်ကြရမဲ့အချိန်လေး အမြန်ဆုံး ရောက်ရှိနိုင်ပါစေ လို့မျှော်လင့်ရင်း ၂၀၀၈ လဲ တနှစ်ကုန်ရပြန်ပြီပေါ့။
အဟဲ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်စကားလုံးတွေတော့အာလူးဖုတ်လို့ ပြီးပြီ ။ မိမိကိုယ်မိမိ ဆန်းစစ်ကြည့် ဖို့ ဘဲ လိုတော့ တယ်။
ဒီတနှစ်အတွင်း ကိုယ် ဘာတွေကောင်းတာလုပ်ခဲ့သလဲ ။ အဟဲ လက်တဖက်ထဲနဲ့ တောင်ချိုးပြီးရေလို့ ရမယ် ၊ လက်ချောင်းလေး ၅ချောင်းစလုံးတောင်ချိုးဖြစ်မှာမဟုတ်လို့ လက်သန်းကလေးက စ်ိတ်ဆိုးပြီး ကျန်နေခဲ့ မယ် ။တော်ပြီ မရေ တော့ပါဘူး ။ မကောင်းတာတွေ ၊ သူတပါး ထိခိုက်ပြီးဒုက္ခရောက်စေတာတွေ မလုပ်မိရင် ပြီးတာဘဲ မဟုတ်လား ။ကိုယ်တိုင်က လဲ ၅ပါးသီလထဲက တပါးကို အမြဲ ချိုးဖေါက်နေတတ်တော့ လူကောင်းတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ၀န်ခံပါတယ် ။ ဒီတော့သူများတတွေကိုလဲ ဆရာကြီးလုပ်မနေချင်ပါဘူး ။ ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့နိယာမလေးကိုတော့လူတိုင်းလိုလို သိနေကြတာဘဲလေ .
။ဒါပေမဲ့အသိခေါက်ခက် အ၀င်နက်နော် ၊ သိပြီးတော့ လိုက်လုပ်ကြဖို့ဝန်လေးနေကြတယ်။လူတိုင်း ဒီစိတ်လေးတွေကို ဒီဖက်နှစ်မှာ ထားခဲ့ ကြပြီး လာမဲ့နှစ်သစ်ကို ကူးကြမယ်ဆိုရင် ပျော်စရာ နှစ်သစ်လေး ရောက်ကြရမှာပါ ။
မနက်ဖန်မနက်အစောကြီး လေယာဉ်စီးရမှာမို့ခုတလော ကံသိပ်မကောင်းတဲ့တွတ် ပီ အား လေယာဉ်နောက်တကြီမ် မလွတ် သွားရလေစေရန် အော်ပရာဟောက်စ်မှာ နယူးယားသွားမအော်ဖို့ဟောက်စ်ဆာဂျင်မလေးငယ်က အမိန့် တော်ချမှတ်ထားတဲ့အတွက် ဒီတနှစ်လဲ မအော်ဖြစ်တော့ ပါ ..
ကိုယ်မအော်ပေမဲ့ လည်း ပျော်စရာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ဟာ အချိန်တန်ရင် သူ့ ဟာသူ ရောက်လာမှာဘဲ မဟုတ်လားနော် ...
အကျင့်ပါနေလို့နဲနဲတော့အော်ပါရစေနော် ။
:kiki : at 12/31/2008 09:04:00 AM
လူတစ်ယောက် သစ်တောထဲက ဖြတ်လျှောက်လာတုံး ရုတ်တရက် အစာရေစာငတ်မွတ်နေတဲ့
ခုန်အုပ်လိုက်တယ်။ သူကအမြန်ဆုံးနှုန်းနဲ့ လှည့် ပြေးပါတော့တယ်။
အစွမ်းကုန်ပြေးနေပေမဲ့ ကျားကလည်း ထက်ချပ်မကွာပြေးလိုက်လာနေတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ တောင်ကမ်းပါးအစပ်နားထိ ရောက်လာ တယ်။
" ဒီကျားရဲ့ အဖမ်းခံရရင် အရှင်လတ်လတ်အစားခံရမယ်။
ချောက်ထဲခုန်ချလိုက်တာကမှ ကံကောင်းရင် ရှင်နိုင် သေးတယ်" လို့တွေးပြီး
တောင်ကမ်းပါးကနေ လွှားကနဲခုန်ချလိုက်တော့တယ်။ သိပ်ကိုကံကောင်းသွားတယ်။
သစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်မှာ သွားတင်နေတယ်။ ဒီအပင်က ကမ်းပါးပြတ်တစ်နေရာမှာ
ပေါက်နေတဲ့ ဆီးပင်။ ဆီးသီးတွေ ပင်လုံးပြည့် သီးနေလေရဲ့။
၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ အားရအားတက်နေဆဲမှာပဲ ကမ်းပါးပြတ်အောက် ဟိုးအဝေးဆီက
ခြင်္သေ့တစ်ကောင်ရဲ့ ဟောက်သံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ အောက်က
သူ့ကိုမော့ကြည့်နေတာ အတိုင်းသား မြင်လိုက်ရတယ်။ ရင်ထဲ "ဖိုကနဲ"
တုန်သွားတယ်။ တစ်ချက်ပြန်တွေးကြည့်ပြန်တော့ ကျားပဲဖြစ်ဖြစ်၊
ခြင်္သေ့ဘဲဖြစ်ဖြစ် သားရဲတိရိစ္ဆာန်ဘဲ။ ဘယ်အကောင်ရဲ့ အစားခံရခံရ အတူတူဘဲ
စိတ်နှလုံး ဒုံးဒုံးချလိုက်နိုင်ချိန်မှာဘဲ အသံတချို့ ကြားရပြန်တယ်။
ကြွက်နှစ်ကောင်က ဆီးကိုင်းကို ကိုက်နေတဲ့ အသံဘဲ။ ရုတ်တရက်
တစ်ချက်ပြာသွားပေမဲ့ ချက်ခြင်းပြန်ပြီး ငြိမ်သက်သွားတယ်။ သစ်ကိုင်းကို
ကြွက်ကိုက်လို့ အကိုင်းကျိုးကျပြီးသေတာက ခြင်္သေ့ကိုက်စားလို့သေတာထက်တော့
ဆီးသီးမှည့်တွေချည်းပဲဆိုတာ သေချာမြင်မိတော့ တယ်။
ဒါနဲ့ဆီးသီးတွေကိုခူးပြီး စားနေတော့တယ်။ သူ့တစ်သက်မှာ ဒီလောက်အရသာရှိတဲ့
ဆီးသီးမျိုး မစားခဲ့ဖူးဘူးလို့ သူခံစားမိတယ်။ သုံးထောင့်သဏ္ဍာန်ရှိတဲ့
သစ်ပင်ခွကြားကောင်းကောင်းတစ်ခုရှာပြီး သေချာ ထိုင်တွေးရင်း စဉ်းစားတယ်။
" အနှေးနဲ့အမြန် သေရတော့မဲ့အတူတူ မသေခင် တစ်ရေးတစ်မော
ဒါနဲ့ သစ်ကိုင်းကိုမှီပြီး တခေါခေါ အိပ်မောကျသွားတော့တယ်။
ကျားနဲ့ခြင်္သေ့ကိုလည်း မတွေ့ရတော့ဘူး။ သူက သစ်ကိုင်းတွေကို အသာအယာဆွဲရင်း
ကမ်းပါးထိပ်ကို ခဲရာခဲဆစ် တဖြည်းဖြည်းချင်း တွယ်တက်လာခဲ့တယ်။
နောက်ဆုံးတော့ အသက်အန္တရာယ်ဘေးက သီသီလေးလွဲလာခဲ့တော့တယ်။
ဖြစ်ပုံက သူအိပ်ပျော်သွားတုံး ဆာလောင်လွန်းတဲ့ ကျားက
ဘယ်လိုမှမအောင့်မစောင့်နိုင်တော့တဲ့အဆုံး ကမ်းပါးပေါ်က ဟိန်းဟောက်ရင်း
လိုက်ပြီးခုန်ချသွားတယ်။ ကြွက်အဖြူနဲ့အမဲနှစ်ကောင်က ကျားဟိန်းသံကြောင့်
ကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်။ ကမ်းပါးပေါ်က ခုန်ချလိုက်တဲ့ကျားနဲ့
ကမ်းပါးအောက်က ခြင်္သေံ့တို့ တိုက်ပွဲအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားပြီး နှစ်ကောင်လုံး
ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့ မောဟိုက် ထွက်ခွာသွားကြပြီ။
လူတွေက အမိဝမ်းက ကျွတ်တဲ့အချိန်ကစပြီး
အကျပ်အတည်းအခက်အခဲတွေဟာ ကျားကြီးလိုဘဲ တစ်ကောက်ကောက်
နောက်ကမပြတ်လိုက်နေတယ်။ ခြင်္သေ့နဲ့တူတဲ့ သေခြင်းတရားဟာလည်း ကမ်းပါးအောက်က
လည်တဆန့်ဆန့်နဲ့ မျှော်ကြည့်နေတယ်။ နေ့လယ်နေခင်းနဲ့
ညဥ့်နက်သန်းကောင်တို့နဲ့တူတဲ့ ကြွက်အဖြူနဲ့အမဲတို့ဟာ ခဏတာဘ၀ရဲ့
ခန္ဒာကိုယ်ကို တစ်လှည့်စီကိုက်ဖြတ်နေတယ်။ တနေ့နေ့မှာတော့ ခြင်္သေ့ကြီး
ခံတွင်းထဲ ကျရောက်မှာကတော့ ဧကန်ပါဘဲ။
လူ့ဘ၀ရဲ့ အဆိုးဆုံးအခြင်းအရာဟာ သေခြင်းဘဲဆိုတာ သိနေမှတော့
တစ်နည်းဘဲရှိတယ်။ သောကကင်းကင်းနဲ့ သစ်ပင်ပေါ်က အသီးကို ဇိမ်ခံတတ်ဖို့ဘဲ။
ပြီးတော့ သောကကင်းကင်းနဲ့ တစ်ရေးဝအောင် အိပ်ပစ်လိုက်ဖို့ဘဲ။
အဲဒီလိုရှုတ်ထွေးမှုကင်းတဲ့စိတ်မျိုးထားနိုင်မှသာ ဘ၀ရဲ့ ချိုမြိန်တဲ့
"ဆီးသီး"ရဲ့ အရာသာ ချဉ်ပြုံးပြုံးကို ခံစားရမှာပါ။
BeautyMax Magazine မှမောင်မောင်လှိုင်၏ စာပုဒ်လေးပါ ။ပေးပို့ တဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့မူရင်းစာရေးသူု တို့ ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
လူ့ ဘ၀တိုတိုလေးသာရှိတဲ့လူ့ လောကကြီးထဲမှာ ပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ကြပါစေ ။
ခရီးလွန်နေတာကြောင့် အချိန်ပေးပြီးစာမရေးနိူင်လို့သူများရေးတဲ့ ပုံပြင်လေးကိုဘဲ တဆင့် ပြန်ဖေါက်သည်ချလိုက်ရတာ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ် ။
:kiki : at 12/30/2008 07:14:00 AM
သူများတတွေ ဒီဇင်ဘာလရောက်ရင် ပိုပျော်တာတို့အကြိုက်ဆုံးလ ဆိုတာတို့၊ နှင်းတွေကျလို့ဟိုရည်းစား ဒီရည်းစားလွမ်းတာတို့ အမျိုးမျိုးအထွေထွေ ရေးကြ တွေးကြ ဆွေးကြတယ် ... ဘာဖြစ်လို့ ပါလိမ့်လို့အံ့သြသလိုဖြစ်မိတယ် .. တနှစ်မှာ ၁၂လ တောင်ရှိတာ .. ဘာလို့ဒီ လကိုမှ ရွေးပြီးကြိုက်နေကြတာလဲနော် ။
ပူတဲ့ နေရာ ၊ပူတဲ့ တိုင်းပြည်မှာနေတဲ့ သူတွေက အေးတဲ့ အချိန်မျိုးကို ရွေးပြီးကြိုက်တယ် ။ အေးတဲ့နေရာမှာနေရတဲ့ သူတွေကလည်းပူတဲ့အချိန်မျိုးကြိုက်ကြတယ် ။ လူ့ မနော လဲ တယ်ခက်ပေသကိုး။ဒီတော့ သူများကြောင်သလို လိုက်ကြောင်ကြည့်မလားလို့အားတင်းပြီးဖြစ်ညှစ်စဉ်းစားကြည့် မိတယ်။
ဟိုး ငယ်ငယ်တုန်း ကလေးလေးဘဝ ပြန်မှတ်မိသလောက်ပြောရတာပေါ့ ။အပူအပင်ကင်းတဲ့ ခလေးလေးဘဝကိုတခါပြန်ပြီးရောက်ချင်သေးတယ် ဆိုသလိုလေ( အာ... ကိုထီးသီချင်းနဲ့ရောကုန်ပါပြီ) ။အင်းဟုတ်ပ ။ နှပ်ချေးတွဲလောင်းနဲ့အရွယ်ကိုး ။ ရည်းစားမရှိသေးတော့ သူငယ်ချင်းဘဲရှိတော့ အတန်းထဲက ဘိုမလေး ဒင်းတင်ထွန်းတဲ့သူ့ နာမယ်က .ဒင်း ..ဆိုတာ တမျိုးမထင်နဲ့အုံး Dean လို့ ပြောတာ .သူ့ အမကဒေါင်တဲ့ လေ (Dong) .။ တော်ပါသေးရဲ့ နောက် တယောက်ရှိရင် ဘဲလ်(Bell) လို့ ခေါ်မလားမသိ ။သီချင်းတပုဒ် ဆိုလို့ ရတာပေါ့ ။သူတို့ အမေက ဘိုမကြီးလေ ။ အဖေ ကလဲ ဘိုကပြား ( နှာခေါင်းရှည် အသားနီစပ်စပ်လို့ဒီခေတ်မှာ အခေါ်ခံရရင်ဘယ်လောက်များစိတ်နာလိုက်မလဲ မသိဘူး၊တော်သေးတယ် သူအသေစောပေလို့ ) ၊ သူတို့ အိမ်က အင်းလျားကန် ကမ်းစပ် အနားမှာ .နှစ်တိုင်း ခရစ်စမတ်ဆိုရင် သူတို့ အိမ်မှာ တနေကုန် ဆော့ကြ ၊စားကြပေါ့ ။ပြီးတော့ ရေကန်စပ်မှာရှိတဲ့သစ်ပင်ပေါ်မှာ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေချိတ်ထားတဲ့စက္ကူပတ်ထားတဲ့အထုပ်ကြီးကို သူငယ်ချင်းမလေးက မျက်စိ အပိတ်ခံရင်းနဲ့ တုတ်တချောင်းနဲ့လိုက်ရမ်းပြီးရိုက်ချ ၊ ကျလာတဲ့လက်ဆောင်လေးတွေ ၊ကစားစရာလေးတွေ ။စားစရာအထုတ်လေးတွေလိုက်ကောက်ပြီးပျော်ကြတယ် ။။ ခုများတော့သူတို့ လဲ ဘိလပ်ပြည်ပြန်သွားပြီး အဆက်အသွယ်လဲ ပြတ်တာ ကြာခဲ့ ပြီဘဲ ။ ဒါလေးတခုတော့ နဲနဲ လွမ်းသလိုပါဘဲ ၊ ဆော့ရ စားရတာကိုး နော်။ ကျန်တာတွေတော့ လွမ်းလောက်စရာသိပ်မရှိပါ ။
အဟား တခု သတိရလာပြီ ။ အဟင့် ရွှတ် ငိုရမလား ရယ်ရမလားမသိပါဘူး ။ ကျောင်းပြီးဘွဲ့ ရပြီးလို့ နောက်လေးနှစ်အကြာ တခုသော ခရစ်စမတ်ရဲ့ နောက်တရက်မှာ ငယ်ရည်းစားကြီးမင်္ဂလာဆောင်တယ်လေ ။ဒါပေမဲ့ သူတို့ သမီးက ကိုယ်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး ။ကံကောင်းသလား ကံဆိုးသလားတော့ မပြောတတ်ပါဘူး ။အဲဒီအချိန်တုန်းကတော့ကိုယ်ဟာကိုယ် ကံမကောင်းဘူးထင်ခဲ့ တာ ။အခု အချိန် ပြန်တွေးကြည့်မိတော့မှ ငါကံကောင်းခဲ့ ပါလားလို့ ထင်မိတယ် ။ ဘာလို့ လဲ သိကြလား ။ ။သူ မိန်းမယူပြီးနောက် ၂ နှစ်လောက်အကြာမှာ ကားတိုက်မှုဖြစ်ပြီး ဆုံးပါးသွားခဲ့ တယ် ၊ သူ့ အတွက် ပြီးတော့ ကျန်ရစ်ခဲ့ တဲ့သူ အမျိုးသမီး နဲ့သမီးပေါက်စလေးအတွက် အတော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ ရသေးတယ် ။ သတ္တဝါတခု ကံတခုဘဲလေ ။ ကြံဖန်တွေးကြည့်တော့ ကလေး တယောက်နဲ့ မုဆိုးမ မဖြစ်လို့တော်ပါသေးရဲ့ လို့အတ္တဆန်စွာ အတွေးပေါက်ခဲ့ ရသေး ။ အင်းလေ ၊ ဒါလဲ လွမ်းလောက်စရာ သိပ်မရှိလှပါဘူး ။
ကျောင်းတက်နေရတဲ့ အချိန်တွေမှာဖြတ်ခဲ့ ရတဲ့ ဒီဇင်ဘာများစွာတွေမှာ ကျောင်းစာလုံးပန်းနေရတာနဲ့Happy New Year ဆိုတာ သိပ်မခံစားဖြစ်ဘူး ။ အဟဲ . ဘာလို့ လဲဆိုတော့ အဲဒီ နယူးယားကြီးပြီးရင် ကျောယား ၊တကိုယ်လုံးယားရမဲ့ စာမေးပွဲတွေက တန်းစီပြီး စောင့် ကြိုနေကြလို့ လေ ။ စာကျက်ပျင်းတဲ့ ကိုယ်တယောက် နှစ်တိုင်း အမြဲ စာမေးပွဲ နီးမှ ဖုတ်ပူမီးတိုက် ကြိုးစားနေကြကိုး ။ဒီတော့ သူများတွေပြောကြ လွမ်းကြတဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာ ချမ်းတာ အေးတာတွေ မခံစားနိုင်ခဲ့ဘူး ။ သွပ် သွပ် သွပ် ...လူဖြစ်ရကျိုးတောင် မနပ်လိုက်ရသလိုဘဲနော် ။ မကျေနပ်ဖူးအချစ်ရယ် တစ်ကပြန်စမယ်...လောဘသိပ်မကြီးပါဘူး .၊ ၁၀ တန်းအရွယ်လောက်က ပြန်စရင်လဲ ရပါတယ် ၊ချစ်လို့ ကောင်းတဲ့ အရွယ်လေးမှာပေါ့။ ရည်းစားတွေ သက်စိထား ၊ ၁၀ တန်းတဖုံးဖုံးကျ ၊ကျောင်းပြေး ၊ အင်းလျှားကန်စပ် သွားထိုင် ..မလုပ်ဖုးူဘူးဆိုတဲ့ ရာဇဝင် တွင်ကျန် မနေရစ်အောင် လုပ်ချင်တာတွေသာ အကုန်လုပ်လိုက်ဖြစ်ရင် ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းလိုက်မလဲ လို့ လေ ။ခုနေSuper Man ကြီးနဲ့တွေ့ ခွင့်ရလိုက်ရင်တော့ ဒီကမ္ဘာမြေကြီးကို နောက်ပြန် အနှစ် အစိတ်လောက်ပြန်လှည့်ခိုင်းချင်လိုက်တာ နော်....လွမ်းစရာလေးများ ကျန်ခဲ့ မလားလို့ ပါ.
အဟား ဘာရမလဲ ဒီနှစ်တော့လူဖြစ်ရကျိုး နဲနဲလေး နပ်မလားမသိပါဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဟက်ပီးနယူးရားကြီးကို အရင်ဦးဆုံးအော်လို့ ရတဲ့တနိုင်ငံမှာ ရှိနေမှာလေ ။။ အဆင်ပြေရင်တော့အော်ပရာဟောက်စ် ဆိုတဲ့နေရာမှာ သွားအော်ရအုံးမယ် ။ ဒါမှ နောက် တနှစ်မှာ လွမ်းစရာလေး တခုခု ရေးလို့ ရလို ရငြား ပေါ့ နော် ။
:kiki : at 12/12/2008 12:39:00 AM
ကြိုတင်အသိပေးပါရစေ ...နှလုံးရောဂါရှိုသူများနဲ့ ကြောက်တတ်သူများ ၊မကြည့် ချင်သူများ ဖွင့်မကြည့့် ကြပါရန်။
ဒီ ဗွီဒီယို အပိုင်းတိုလေးဖေါ်ပြရတဲ့ အကြောင်းလေးက စာရှု သူမိတ်ဆွေများထမင်းစားပျက်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေနဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးပြီးတနေ့ ဓူဝလှုပ်ရှားနေကြရသူများအတွက် အန္တရာယ်ကင်းအောင် ဂရုစိုက် ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့စေတနာလေးနဲ့ ပါ ။ အမေရိကားလို ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ နေရာမျိုးမှာ ဆိုင်ကယ်ဟာ သိပ်ပြီးအရေးမပါလှပေမဲ့ ၊ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံလေးမှာလို မြေနေရာကျဉ်း၊လမ်းကျဉ်းလေးတွေပေါ်မှာ ကားတွေ ။မော်တော်ယာဉ်မျိုးစုံ ပြွတ်သိပ်မောင်းနှင်နေရတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာ ဒီလို မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့မလှုပ်ရှားရင် လိုတဲ့ ခရီးအချိန်မှီရောက်ဖို့ခက်တယ်ပေါ့။ MRT လိုင်းတွေ ပြေးတဲ့ နေရာနဲ့ ဝေးတဲ့နေရာမျိုးမှာ သွားလာနေရသူတွေဟာလဲ ဆိုင်ကယ် ကိုဘဲ အဓိက အသုံးပြုနေ ကြရတယ်လေ။ ဒါကြောင့် ဒီလို မစီးမဖြစ် မောင်းနှင်စီးနင်း နေရတဲ့ ဆိုင်ကယ်သမားများ လမ်းစည်းကမ်းနဲ့ အညီ မောင်းနှင်နိုင်ကြစေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ် ။
မီးပွိုင့်လမ်းဆုံတွေ ( လမ်း သုံးခွ၊လေးခွ၊ငါးခွ၊ T ပုံသဏ္ဍန် အစရှိသဖြင့် ) ရောက်ရင် ၊ ဆိုင်ကယ်တွေဟာ မော်တော်ကားတွေလို ဒါရိုက်ကွေ့ လိုက်လို့ မရပါဘူး ။ အရင်ဦးဆုံး ကိုယ်မောင်းနှင်နေတဲ့အဖက်ခြမ်းမှာ ရပ်ပြီး၊ နောက် သွားလိုတဲ့ယာဉ်ကြောကိုပြောင်းပြီး၊ စောင့်ပြီးမှ တဆင့် ကွေ့ ချိုး ရပါတယ်။ ဒါ ရိုက်ကွေ့ လိုက်မယ်ဆိုရင် ပုံထဲမြင်ရတဲ့အတိုင်း အလွန်ဘဲ အန္တရာယ်များလှပါတယ် ၊ နောက်ကြည့် မှန်မကြည့် ဘဲ ယာဉ်လမ်းကြောင်းပြောင်းတာ ။ အချက်ပြမီး signal light မပြဘဲ အလျှင်စလို ချိုးကွေ့ တာတွေဟာလဲ ကိုယ့် အန္တရာယ် ကိုယ်ဖိတ်ခေါ်နေသလိုပါဘဲ ။
(တနေ့ .ဓူဝ ဘီးနှစ်လုံးနဲ့ဖက်လိုက် ခွလိုက် သွားလာ လှုပ် ရှားနေရသူများ၊ မလွှဲသာလို့ ဆိုင်ကယ်မောင်းပြီး ဂျောင်း နေကြရသူများ ၊ အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းစွာဖြင့်လိုရာခရီး ရောက်နိုင်ကြပါစေ )
(ဒီပုံလေးက ထိုင်ဝမ်အလယ်ပိုင်းတောမြို့ လေးရဲ့ မီးပွိုင့်တခုမှာရိုက်ယူထားတာပါ)
:kiki : at 12/06/2008 12:13:00 AM
ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်အဖွား( အမေ့ရဲ့အမေ)ကိုသတိရမိသေးတယ် ။ အဖွားရှိနေတုံးက သူ့ ကို စ ခဲ့နောက်ခဲ့ တာလေးတွေကိုပေါ့လေ။အဖွားလဲ ဒီလိုဘဲ သိပ်ယောင်တတ်တာ ။တခါတလေ အဆင်မသင့်ရင် ဒေါသထွက်တတ်တာလေး ကလဲ အတော်လေးချစ်စရာကောင်းတယ် ။အဲဒီအချိန်ကျရင် ရှမ်းလို တောက်လျှောက် မနားတမ်းရွတ်နေတော့တာဘဲလေ ။သူကဗမာလို မြန်မြန်နဲ့ရေရေလည်လည်မပြောတတ်တော့ အမြန်နှုံးနဲ့ ချချင်ရင် ရှမ်းလို ရွတ်ရတာပေ့ါ။ အဟဲ ကိုယ်တို့ အငယ် ၃ ယောက်ကလည်း ဗမာတောထဲမှာကြီးပြင်းခဲ့ ရတော့ ရှမ်းစကားဆိုရင် ထမင်းစားရေသောက်လောက်ဘဲ သိတာလေ ။ (ဒါမှ မသိရင် ထမင်းငတ်မှာစိုးလို့ ပါ)။ဒီလိုဘဲ သူကယောင်တတ်တော့ လန့် သွားရင် လက်ထဲမှာ ရှိတဲ့တခုခုနဲ့လှမ်းပေါက်တတ် ၊ လွှင့်ပစ်တတ်တာလေ။အဲဒီတော့ သူ့ ကို စပြီးရင် အရှောင်အတိမ်း ဂျက်စီဂျိန်းလေးကလဲ လုပ်ရသေးတယ်။ပျော်စရာ တခုလို သဘောထားပြီး ရှိစုမဲ့စု ဒီအဖွားတယောက်ကို ဘဲ အမျိုးစုံအောင် စခဲ့၊နောက်ခဲ့ ရတာ ။ ပြန်တွေးရင် လွမ်းမိပါသေးရဲ့ ။
့အဖွားအကြောင်းပြောနေတာနဲ့ဗွီဒီယိုပုံလေးအကြောင်းမရောက်တော့ဘူး ။သည်းခံပါ ။ပုံလေးထဲက အတိုင်းဆိုရင် ဒီလမ်းဖြတ်ကူးနေတဲ့အင်္ဂလိပ် အဖွားကြီးလဲ အတော်လေးယောင်တတ်ပုံရတယ်နော် ။ ဒါမှမဟုတ် ဒေါသထွက်လွယ်တဲ့ သူလားမသိ ။ သူ့ ဟာသူ စိတ်ကူးယဉ် ဖီလင်လေးတက်ပြီး မျဉ်းကြားကနေ လမ်းဖြတ်ကူးနေတုံး ကားဟွန်းသံ ကျယ်ကြီးက အနားမှာ ရုတ်တရက် ထွက်လာတော့ လန့်ဖျန့် ပြီး သူ့ လက်ထဲမှာကိုင်ထားတဲ့ပိုက်ဆံအိတ်နဲ့ လှမ်းရိုက်လိုက်တော့ဒီအရှိန်လေးတောင်မခံနိုင်တဲ့Air Bag ကပွင့် ထွက်ရတယ်လို့ နော် ။ ဘာကားအမျိုးအစားလဲ မသိဘူး ။ဒါလေးတောင် ခံနိုင်ရေ မရှိတဲ့ကား ။ကိုယ်တကယ် ကားဝယ်စီးနိုင်တဲ့ အခါ မဝယ်မိအောင် သတိထားမှဘဲ ၊ အဟဲ . လောလောဆယ်ဆယ် စိတ်ထဲ တေးထားရတာလေ ။
နောက်တချက် စဉ်းစားမိသည်မှာ( အတုံးလိုက် မစားချင်လို့ စဉ်းပြီးစားတယ်လို့မထင်မှတ်စေလိုပါ ) သူတို့ဆီက ကားမောင်းသူတွေကလဲ စည်းကမ်းရှိကြပါဘိ ။ ဗမာပြည်ကလူတွေဆို ဒီလို ဘယ်ရမလဲနော် ။လမ်းကလည်း လူရှင်းနေတယ် ၊ မော်တော်ပီကယ်တို့ကိုရွှေပရုပ်လုံးတို့ လည်းမရှိ တဲ့မီးပွိုင့်မှာ ဒီလို တုန်ချိချိနဲ့ကားလမ်းကူးနေတဲ့ သူမျိုးကို ရပ်စောင့် နေကြပါ့မလား ။စည်းကမ်းရှိတာချင်းလဲ ကွာခြားကြတယ်လေ ။ (အဟဲးအကောင်ကြီးလေ ပိုဆိုး(စား)လေ ဒို့ တိုင်းပြည်နဲ့ယှဉ်နိုင်အုံးမလား )အင်းပြောရင်းဆိုရင်းလမ်းချော်တော့မှာဘဲ ၊ အမြန် ဘရိတ်အုပ်အုံးမှ ဒီ စိတ်နဲ့ဒီလက်တွေကို ။။
:kiki : at 12/04/2008 01:00:00 PM
ချစ်ရ ခင်ရ တခဏ
ပျော်စရာ ရွှင်စရာ ရေပွက်ပမာ၊
သောက အမုန်း တသက်လုံး
တွေ့ ကြုံ ဆုံကွဲ အစဉ်အမြဲ။
ဒါဆို မုချ ရမည်ပ
သေခြင်းကောင်းသော ဒီဘဝ ။
(ခုတလော သေခြင်းအကြောင်းတွေဘဲ စဉ်းစားမိနေလို့ နဲ့စူးရှရှ ဖြစ်နေတဲ့ရင်ဘတ်ထဲက ဒါဏ်ရာလေး သက်သာရာ ရလိုရကြောင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတိပေးနေတဲ့အတွေး ၊ အရေးလေးပါ )
:kiki : at 12/03/2008 11:55:00 PM
ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများမှာ အသည်းရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နာမကျန်းဖြစ်နေသူများ။ဆုံးပါးကြသူများ ခုတလောမှာ စိတ်မချမ်းသာဖြစ်စရာကောင်းလောက်အောင်ကို ကြားနေ၊မြင်နေရပါတယ်။အထူးသဖြင့် Bပိုးလို့ လူသိများနေတဲ့ Hepatitis B ကြောင့် ဖြစ်လာရတဲ့နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေပါ ။
ဒီရောဂါဟာ ဗိုင်းရပ်ပိုးတမျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါ တမျိုးဖြစ်ပြီး အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာ အနှစ် ၃၀ အတွင်းသိသိသာသာကြီးဖြစ်နှုန်းတက်နေပါတယ် ။ တကမ္ဘာလုံးနဲ့ တွက်ကြည့်ရင် လူ ပေါင်း သန်း၅၀၀ကျော် မှာ ဘီပိုး နဲ့စီ ပိုးတွေ ကူးစက်ပြန့် ပွားမှုတွေ ခံနေကြရပါတယ် ။လူ ၁၂ ယောက်မှာ ၁ယောက် ဟာ ဒီ ရောဂါ ရှိနေပါပြီ ။ သူ့ ကြောင့် တနှစ်မှာ လူပေါင်း ၁.၅ သန်း လောက် အသက်ဆုံးရှုံး နေကြရပါတယ်။
အရင် ကတော့ A,B ၂မျိုးဘဲ လို့ သိခဲ့တာ နောက်တော့ NonA-NonB တမျိုး ထပ်မံတွေ့ ခဲ့တယ်။ ဒိနောက်ပိုင်းမှာ ဆက်ပြီး မျိုးသစ်တွေ တွေ့ လာလို့NonA-NonB ကို C လို့ ပြောင်းလဲခေါ်ခဲ့ ပါတယ် ။ခုဆိုရင် အမျိုးပေါင်းဟာ A,B,C,D,E,F,G အထိရှိသွားပါပြီ။ A,E,F တို့ ဟာ အစားအသောက်နဲ့ ရေတို့ ကတဆင့် ကူးစက်တယ် ။ B,C,D,G တို့ ဟာ သွေး နဲ့ခန္ဓာကိုယ် အရည်ကြည် ၊ တံတွေး၊ချွေး၊ ဆီး မှတဆင့် ...ဥပမာ သွေးသွင်းတာ၊အပ် တချောင်းထဲ အတူ ရောသုံးပြီး ဆေးထိုးတာ၊ဆေးမှင်ကြောင်ထိုး ၊နားဖေါက်တာ၊ သွားပွတ်တံ ၊မုတ်ဆိတ်ရိပ် ဓါး ကရိယာတွေ အတူသုံးတာ ။လိင်ဆက်ဆံ ရာမှ တဆင့် နဲ့လိင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါ( Sexually Transmitted Disease) တွေကြောင့် ကူးစက်နိုင်တယ်။
ရောဂါလက္ခဏာ တွေအနေနဲ့ပထမဦးဆုံး နုံးမယ် ။နဲနဲဖျားရင်ဖျားမယ် ။ အစားအသောက်ပျက်မယ်။ ပျို့ အန်မယ်။ ဆီးအရောင် ဟာ ရေနွေးကြမ်းရင့်ရောင် ဝါလာမယ်။နောက် ၄-၅ ရက်လောက်ကျော်ရင် အဖျားကျပြီး အသားတွေ ၊မျက်စိတွေ ဝါလာမယ်။
ဒီအမျိုးများစွာထဲမှာ B နဲ့ C ၂မျိုးဟာ လူတွေကို ဒုက္ခ အပေးဆုံးပါ။ B ပိုးဟာ လူတိုင်း ကြောက်ရွံ့ နေကြတဲ့AIDS ဖြစ်စေတဲ့HIV ပိုးထက်စာရင် အဆ ၁၀၀ ပိုပြီး ကူးစက်လွယ်ပါတယ် ။
ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ပြောရရင် အများကြီးပါ ။ စာဖတ်သူများငြီးငွေ့ မှာစိုးလို့အဖြစ်များတဲ့ B နဲ့C ထဲက ဘီပိုးအကြောင်း အဓိက ဖေါက်သည်ချပါမယ် ။
ဒီ ဘီပိုးဆိုတဲ့ အကောင် က လဲ အတော်ဆိုးတာ ..လူတယောက်ထဲ ဝင်ပြီးရင် ကိုယ်ခံအားကောင်းတဲ့ သူဆိုရင်သူ့ ကို ပြန်တိုက်နိုင်လို့ပြန်ထွက်သွားတတ်တယ် ။၈၀% လောက်ပေါ့ လေ ။ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ခံအား မကောင်းတဲ့ သူ ဆိုရင် တကယ်ဘဲ ကိုယ်ခံရတော့ တာပါဘဲ။ ၂၀% ပိုးဝင်ခံရတဲ့ သူတွေ ထဲမှာ ဒီကောင်တွေ ဆက်လက်ရှင်သန်ပြီး နာတာရှည် ပိုးသယ်ဆောင်တဲ့ သူ တွေ (Chronic Carrier )အနေနဲ့ရှိနေရပါတယ်။နာတာရှည်ပိုးသယ်ဆောင်သူဆိုတာ သူ့ကိုယ်ထဲမှာ ဒီ ဘီပိုးဟာ ၆လကျော်တဲ့ အထိ မပျောက်ပျက်သွားဘဲ ဆက်ရှိနေသူတွေပေါ့။ တချို့ တလေကတော့ သူကိုယ်တိုင်ဘာမှရောဂါခံစားရတဲ့ လက္ခဏာ မပြဘဲ တခြားသူတွေကို ရောဂါကူးစက်စေတတ်တဲ့ Healthy Chronic Carrier အနေနဲ့ဘီပိုးတွေကို သယ်ဆောင်ထားတတ်ကြတယ်လေ ။
ဒီ ပိုးဟာ လူ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ သိပ်ကြာသွားရင် Virus B ရဲ့ DNA ဟာ လူ့အသည်းထဲမှာရှိတဲ့အသည်း ဆဲလ်တွေရဲ့DNA ထဲကို တဖြေးဖြေးပေါင်းစပ် ပြီး ကြာလာရင် ( ၁၀ နှစ် ၊ အနှစ် ၂၀ လောက်ရှိရင် ) အသည်းခြောက်ရောဂါ ၊ အသည်းကင်ဆာရောဂါ တွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီ ဘီပိုးရှိတဲ့လူတယောက် ဟာ သာမန်လူတယောက်ထက် အသည်းခြောက် ၊ အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်ဖို့ ၂၉၅ ဆ အခွင့် အလမ်းပိုရှိ ပါတယ်။
ကလေးတွေ မှာကိုယ်ခံအား နဲလို့ ဘီပိုးဝင်ရင် ၈၀% ဟာ ပိုးလုံးဝပြန်မထွက်တော့ဘဲ HBsAg ပိုးကို နာတာရှည်ပိုးသယ်ဆောင်သူ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ မွေးကာစကလေးတွေမှာဆို ကိုယ်ခံအားလုံးဝ မရှိလို့ အဲဒီ အချိန် ဘီပိုးဝင်လိုက်ရင် တသက်လုံး မထွက်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်မှာ ဘီပိုးထဲ က HBsAg နဲ့ HBeAg ၂မျိုးစလုံးရှိ နေရင် ၊ သူမွေးထွက်လာတဲ့ကလေး ကို ၂၄ နာရီ အတွင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ် ။
ကာကွယ်ခြင်းဟာ ကုသခြင်းထက်ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ် ။ရောဂါ ဖြစ်လာတဲ့ အထိစောင့် ပြီးမှ ဆေးကုမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆ တွေကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ လိုပါတယ် ။ ငွေကုန် ၊ လူပန်း ။ အဆင်မသင့်ရင် ရော ဂါကျွမ်းပြီး မလိုလားအပ်တဲ့ အရာတွေ ရှောင်နိုင်အောင်လို့ ပါ။
ဒီတော့ အထက်မှာ ဖေါ်ပြခဲ့ တဲ့ ရောဂါ ကူးစက်စေနိုင်တဲ့ အချက်တွေကို ရှောင်နိုင်ရင် ရောဂါကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရာရောက်ပါတယ် ။
စစချင်း ဘီပိုး စမ်းသပ်တွေ့ ရှိတဲ့လူတိုင်းလဲ သိပ်ပြီး အစိုးရိမ်လွန်စရာ မလိုလှပါဘူး ။ကိုယ်ခံအားကောင်းသူတွေမှာ ဒီပိုးကို ခုခံတိုက်ဖျက်နိုင်တဲ့ ပဋိဇီဝ ဓါတ် (Antibody) ထွက်လာပြီးရင် ဒီဘီပိုးကို ကြောက်စရာ မလိုပါဘူး။ ဒီဓါတ် မရှိသေးတဲ့သူတွေ ဟာ တကယ်လို့ ရောဂါကူးစက်ဖို့ အခွင့်အလန်းရှိသူများ ( High Risk Person) .. ဥပမာ ရောဂါရှိပြီးသူများနဲ့လက်ပွန်းတတီး အတူနေထိုင်ရသူများ။ လူနာနှင့်အမြဲ ဆက်ဆံတွေ့ ဆုံ ကိုင်တွယ်နေရသူများ ၊ ဆရာဝန် ၊ဆရာမ၊ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ပေးနေသူ ။သွေး၊ဆီး၊ဝမ်း၊သလိပ် တို့ ထိကိုင်နေရသူမျာ ၊ ကျောက်ကပ်ပုံမှန်ဆေးနေရသူများ ။ ရောဂါတခုခုကြောင့် မကြာခဏ ပုံမှန်သွေးသွင်းနေရသူများ..စသူတို့ဟာ ဘီပိုးရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားရင်အကောင်းဆုံးပါဘဲ ။
ဘီပိုးရောဂါ လက္ခဏာတွေ ခံစားနေရချိန်မှာ အရေးအကြီးဆုံးက ပြည့်ဝစွာ အနားယူပြီး အဟာရဓါတ်ညီမျှလုံလောက်အောင်စားပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။ဒါမှ ကိုယ်ခံစွမ်းအားမြင့်တက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရောဂါကုသမှုကတော့ ဘာမှ ထူးထူးထွေထွေ မရှိလှပါဘူး .. ဖြစ်လာပြီးရင်တော့ follow up အနေနဲ့အသည်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့သွေးစစ်မှုများ ( Liver Function Test ,SGOT(AST) ,SGPT(ALT),AFP စသဖြင့်)နဲ့ultrasound ,liver scan ရိုက်၍ စစ်ဆေးမှုများ ကို ရောဂါ အခြေအနေအလိုက် မှန်မှန် လုပ်ပေးရင် ။နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အသည်းကင်ဆာကို စောစီးစွာ ကြို တင်သိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
စီပိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက်မှ ဆက်လက် ဖေါက်သယ်ချပါအုံးမယ် ...
လူသားအားလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင် စွာနဲ့အသက်ရှည်နေနိုင်ကြပါစေ ။။
(အသည်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဦးခင်မောင်ဝင်းရဲ့ဆွေးနွေးချက်များကို မှီငြမ်းရေးသားပါသည် ).. ဆေးသုတေသနမှာလုပ်ခဲ့ စဉ်အချိန်ကာလလေးများမှာ ဆရာ့ ရဲ့ပို့ ချသင်ကြားမှုများကို အမှတ်တရ ။။
:kiki : at 12/03/2008 01:09:00 AM